SYRIA: Xoogaga Kurdida SDF oo bilaabay markale weerarka Saldhiga Daacish • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / SYRIA: Xoogaga Kurdida SDF oo bilaabay markale weerarka Saldhiga Daacish
SYRIA: Xoogaga Kurdida SDF oo bilaabay markale weerarka Saldhiga Daacish
Waxaa markale duqeyn xoogleh lagu bilaabay tuulada Baghouz ee bariga Siiriya oo ah saldhigii ugu danbeeyey ee kooxda xagjirka ah ee Daacish.
Xoogaga SDF oo gacan ka helaya diyaaradaha Maraykanka ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay duqeyn ku waday deegaankaasi, waxaa dhawaan hakad la geliyey hawlgalka dhulkaasi ka socda si fursad loo siiyo inay goobtaasi kasoo baxaan dadka rayidka ah.
Asbuucii lasoo dhaafay ayey kumanaan shacabka oo u badan caruur iyo haween isaga soo baxeen dhulkaasi waxaana kamid ahaa qoysaska dagaalyahanada Daacish, waxaa iyaguna jiray boqolaal ka tirsanaa dagaal-yahanada Daacish oo iskood isku dhiibay kuwaasi oo sheegay inay u adkeysan waayeen duqeynta ku socotay.
Afhayeenka u hadlay kooxda SDF ayaa Axadii shalay warbaahinta u sheegay inay hada joogsadeen dadkii rayidka ahaa ee kasoo baxayey tuuladaasi ay ku hareeraysan yihiin, taasi oo uu sheegay inay muujineyso in ay dhulkaasi isaga baxeen intii badneyd shacabka ayna hada bilaabayaan hawlgalka ugu danbeeyey oo ay ku galayaan gudaha tuuladaasi.
Dagaalka oo Axadii gelinkii danbe dib u bilowday ayaa illaa saaka oo isniin ah socda, manacada inta ay ku qaadan doonto xoogaga SDF inay la wareegaan tuuladaasi iyo waliba tirada dagaalyahanada Daacish ee weli halkaasi ku jira.